IBlackBerry KeyONE ifika ngokusemthethweni eSpain | Iindaba zeGajethi
IBlackBerry ikwiinkumbulo zabo bonke abathandi beetekhnoloji abazihlonelayo, nkqu nezo singazange sazibona zisetyenziswa ngokwenyani kwaye sabona ngeNokia 5800 yethu (nayo emiselwe ukuba ife) indlela abantu abatsala ngayo kakhulu kweso sikrini sincinci sinekhibhodi enkulu. Nangona kunjalo, uphawu lwaseTshayina oluthathe ifemu luye lwafuna ukwenza olona tsalo lwelogo yalo, ngeziphumo ezibi.
Eyokugqibela yayiyiBlackBerry KeyONE, isixhobo esasifuna ukudibanisa ezona zilungileyo kwiBlackBerry kunye neyona ilungileyo kwi-Android kwisixhobo esinye, ngaphandle kokuba sifumene ukugxeka okuninzi ngexabiso kunye nezinto ezisetyenzisiweyo. Namhlanje iBlackBerry KeyONE ifika kwimakethi yaseSpain, kanye xa kungekho mntu uyifunayo.
Ukuphehlelelwa kusemthethweni eSpain, kangangokuba i-TCL (ifemi enamalungelo eBlackBerry) Ulumkisile ukuba ukuqhubana kwakhe neempawu kuye kwabangela umdla, mhlawumbi kakhulu kuthathelwa ingqalelo impumelelo encinci yesixhobo ... uyakwazi ukusiqonda? Ke ngoko siya kuba nakho ukubamba iBlackBerry KeyONE kwiMediaMarkt, kwiNdlu yeeFowuni, e-El Corte Inglés, Amazon kunye ne-FNAC phakathi kwe-499 kunye ne-599 euro ngokuxhomekeke kwindawo ekhethiweyo kunye nezibonelelo ezisetyenzisiweyo.
Eyona nto imangalisa nangakumbi kukuba iVodafone ifuna ukuthatha inxaxheba koku kuzalwa kwakhona kweZombi, kwaye unokuyifumana ngenkqubo yayo yezemali kunye nekhontrakthi ... inomdla. Le fowuni inepaneli ye-4,5 with enesisombululo se-FullHD kunye nekhibhodi ebonakalayo, kunye neprosesa yeklasikhi ye-Snapdragon 625 eyenziwe yiQualcomm kunye naphakathi (okumgangatho ophakathi). Iikhamera aziphambani ngokuchanekileyo, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ukuba ngexabiso elifanayo sinokufumana phantse iGPS S8. Ngokuqinisekileyo, IBlackBerry iyala ukunyamalala, kwaye ukufika kwayo eSpain kusemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IBlackBerry KeyONE ifika ngokusemthethweni eSpain